EyeDwarha 19, 2018 admin
Coinbase imithombo evulelekile isixhobo kwehlise yokhuseleko
Coinbase wenza kutshanje uqhekeko, isixhobo yokutshintshwa kwamanqaku ukhuseleko ezenzekelayo ifumaneke kuluntu. Ngokuthi uSalus, emva kokuba wamaRoma isithixokazi ukhuseleko kunye nentlalo-ntle, kweprogram izakukhetha ngokuzenzekela ukubaleka kwaye ukuqwalasela yabavavanyi zokhuseleko ezahlukeneyo kwaye ikhuphe ingxelo ngeziphumo. Ifumaneka njengesixhobo evulekileyo-umthombo kwi GitHub eqala namhlanje, Salus kuthiwa ukunikela uncedo lokuba akwazi ukulungelelanisa kundlunkulu kuhlolwa zokhuseleko lonke inani elikhulu lwendawo zokugcina yokugcina software, Sizamela ukuba uqwalasele vuavanyisi ukwenzela iprojekthi nganye eyahlukileyo.
Coinbase uchaza ukuba usebenzisa ukudibanisa ikhowudi yabantu reviews scan yona ukuqinisekisa nokuphakwa yayo imveliso njengoko “ekhuselekileyo njengoko kunokwenzeka… Izixhobo ezinjengezi kusinceda ehanjiswe ngokukhawuleza, kwaye thina kakhulu sinombulelo le mizamo umthombo evulekileyo. Yaba Kungalo moya ukuba Coinbase waqalisa open source fund yayo, engumbonakalaliso nombulelo ngenxa yale hlobo lomsebenzi noluntu-… Isinceda ukunyanzelisa imigaqo yokhuseleko yokutshintsha nganye yenzelwe ukuba codebase kwaye iqinisekisa kukho loop ingxelo ekhawulezayo kunye umphuhlisi malunga semngciphekweni ezinokwenzeka.”
umphathi hedge fund uya kwamkela Bitcoin ngenxa yakhe sendawo $ 16M
A 10,000 unyawo square, 32 unyawo zemizi ebanzi, ukuba yentengiso nge International Realty kunye Douglas Elliman Estate Real Sotheby kaThixo. Le ndlu ezidwelisiweyo $15.9 million. Nokuba Bitcoin okanye imali ziya kwamkelwa ukuba intlawulo. Le kowu yi Roy Niederhoffer, ngubani umongameli R.G New York-based. Niederhoffer Capital Management, inc, waza wathi: "Mna ikholwa omkhulu Bitcoin, I ngokwenene mna yasenza njalo kuyo, yaye ndifuna ukuba ngumnikazi engakumbi. "
Ukuba umntu uhlawula usebenzisa cryptocurrency, Niederhoffer uthi, wayezigubungela nje isabelo sakhe yeendleko lokuvala in lwemali nzima. "Enoba izibophelelo kunye abarhwebi zemirhumo, Bendiya kuhlawula ngemali kwaye ugcine Bitcoin "wathi.
North Korean iqela Uchwepheshe uLazaro weba isiqingatha billion zeerandi crypto, ngokuvumelana ukuxela
Iqela kusiko bango North Korea kaThixo, wabiza uLazaro, likwazile ukweba isiqingatha billion zeerandi cryptocurrencies phezu, umbiko ubonisa. Ingxelo yonyaka evela lokhuselo umthengisi Group-IB sicacisa ukuba uLazaro emva 14 hacks kwi ukutshintshiselana crypto ukususela ngoJanuwari 2017, bavuna ezinkulu $571 million evela ekuhlaseleni.
Iindaba lumele amabango kumagosa e-South Korea, owathi ngoFebhuwari ukuba kusenokwenzeka imigewu North Korean weba amashumi ezigidi zeerandi’ eveza cryptocurrencies ku 2017. Iindlela ezisetyenziswa imigewu ukuze baphumeze zabo ziquka yobuqhetseba umkhonto, zobunjineli lwentlalo malware.
Umzuzwana uqala kuqala entsha ukuxhasa crypto, blockchain ezintsha fintech
Urhulumente US Ngokuthe ngcembe ekuhlanganiseni cryptocurrency kunye nobuchwepheshe zemali zibe isimiso elawulayo, ukudibanisa semthethweni kunye nenkxaso ngakumbi isithuba. I Ima umemezele ukuba usungulo qhinga Hub for Innovation and Financial Technology (FinHub). FinHub uya ukuqhagamshelana kunye nokuhlaziya noluntu ngemiba enxulumene umzuzwana kunye namanyathelo ukujongana zasasazwa iteknoloji ileja kuquka blockchain kunye cryptocurrencies, amacebiso mali ezenzekelayo, imali yokuthenga digital basemoyeni.
Valerie A. Szczepanik, Advisor Senior for asethi Digital Bobugcisa kunye noMlawuli Associate of Licandelo umzuzwana ngayo Corporation Finance ikhokelela Finhub waza wathi umzuzwana wakwenza kwacaca ukuba sele vula ekusebenzeni nabaphuhlisi fintech ezingqinelanayo, njengoko ngokuchasene nabo. I saziso wathi eluntwini kunye nokufikelela ziyinxalenye yesicwangciso ye umzuzwana ukuba sondle noochwephetsha, ukugcina italente kule US nokusebenzisana neenkokeli, futurists kunye nabavelisi zimvo abo ekudaleni uqoqosho digital.
Ingxelo Daily Market Kraken for 18.10.2018
exchange Japanese onelayisensi you ...
Post Previous:Crypto News 18.10.2018
Post Next:Crypto News 20.10.2018